reMarkable ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ် | eReaders အားလုံး
Joaquín Garcia က | | စာဖတ်သူများ, NOTICIAS
စာဖတ်ခြင်းကိရိယာများတွင်မျက်နှာပြင်ကြီးများအတွက်စွဲလမ်းမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာသည်။ Sony DPT-S1 နှင့်အခြားမော်ဒယ်များကိုဖြန့်ချိပြီးသည့်နောက်ယခုလူသိများသော်လည်းမသိသေးသောကုမ္ပဏီများသည်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပါသည့်ထုတ်ကုန်များကိုစတင်ရောင်းချနေသည်။
ဒီအမျိုးအစားအတွင်းနောက်ဆုံးစက်ဖြစ်ပါတယ် မှတ်မိ, eReader တစ်ခုသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုလုံးသည်အရာအားလုံးကိုမှတ်မိနိုင်သကဲ့သို့ဖတ်နိုင်စေရန်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုရှိသည်။ ဒီကိရိယာက cလူအများစုအတွက်ဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းတစ်ခုရှိပါတယ်.
reMarkable သည် 1 Ghz ပရိုဆက်ဆာပါသည့်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ 512 Mb of ram နှင့် ၁၀.၃ လက်မမျက်နှာပြင် resolution ရှိပြီး resolution ဖြင့် 10,3 x 1872 pixels နှင့် 1404 ppi ရှိသည်။ ဒီကိရိယာမှာရှိတယ် စီးပွားဖြစ် Linux အခြေပြုစနစ်နှင့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 8 Gb။ touch screen ရှိခြင်းအပြင် reMarkable တွင်လည်း၎င်းဖန်သားပြင်တွင်မှတ်စုများကိုမှတ်သားရန်ခွင့်ပြုထားသည့်တံတိုင်းတစ်ခုရှိသည်။
reMarkable သည်၎င်းကိုကြီးမားသောဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရေး။ ဖတ်နိုင်သည်
ဒီကိရိယာရှိလိမ့်မည် မည်သည့် add-ons မပါဘဲ $ 529 မှာစျေးနှုန်း။ သို့သော်ယခု၎င်းကိုစတင်ရောင်းချမှုကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါဆိုငါတို့ဒီပစ္စည်းကိုသီးသန့်ထားရင်၊ reMarkable သည်ဒေါ်လာ ၃၇၉ ကျသင့်မည်။ များစွာသောကျွမ်းကျင်သူများကိုကြောက်လန့်သောစျေးနှုန်းကွာခြားချက်။
ကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့တယ် အဆိုပါ vaporware ဖြစ်ရပ်ဆန်းလူတွေက ၀ ယ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ဘာမှမရဘူး။ တရားဝင်ဖြန့်ချိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး။
များစွာသောလူတို့ကကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူကိစ္စမျိုးကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအကျိုးကျေးဇူးများမှာအလွန်အသေးစိတ်ကျနေသဖြင့်၎င်းစက်သည်မရှိဟုယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။ တကယ်လို့ရှိရင် reMarkable နဲ့အပြိုင်အဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာပါ Onyx Boox Max သို့မဟုတ် Sony DPT-S1 ကဲ့သို့သောအခြားကြီးမားသော screen ထုတ်ကုန်များ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤသည်မှာလာမည့်သြဂုတ်လ 2017 တွင်ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည် သို့မဟုတ်မဟုတ်လော သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ယေဘုယျ » NOTICIAS » reMarkable ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ကြီးတစ်ခု
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ပေမယ့်ကန့်သတ် device ကို။ ၎င်းသည်ဖတ်နိုင်သည့်ပုံစံများနှင့်၎င်းတွင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်စာဖတ်သူမရှိသောကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ စကားမစပ်ပြောရရင်ဒေါ်လာ ၃၇၉ တောင်မှသူကတက်ဘလက်တွေ၊ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဘာလုပ်နိုင်တယ်၊ မင်ကစာဖတ်တာ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ၊ အမှုကိစ္စအတွက်ဘယ်လောက်အကန့်အသတ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်စျေးကြီးနေပုံရတယ်။ ဟမ်စာရိုက်သည့်အချိန်တွင်လန်းဆန်းမှုနှုန်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အရေးအသားလက်တွေ့ကျကျချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါမှင်ထပ်လုပ်ချင်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဖြူရောင်နောက်ခံကိုကမ်းလှမ်းခြင်းပါ။ ထိုတွင်၎င်းသည်အဖြူရောင်ထက် ပို၍ မီးခိုးရောင်ရှိသည်ဟုပြသသည် (အထူးသဖြင့်ဘောင်မှသိသာသော) စာဖတ်သူများအား ၁၀ လက်မသို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောစာများဖတ်ရန်အလင်းရောင်ပြသရန်မည်သည့်ပြifနာရှိပါသလဲ။
10″ Amazon ereader ကိုငါတို့တွေ့မှာလား။ ခေါင်းဆောင်များသည် ဦး ဆောင်လမ်းပြရမည်။ အကယ်၍ အမေဇုံကယင်းကိုအားတက်အောင်လုပ်နိုင်လျှင်အခြားသူများအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေလိုက်နာရန်အတိအကျခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။
Consuelo Salas Lamadrid ဟုသူကပြောသည်
အေးမြ။ လွှဲပြောင်းမန်နေဂျာများကဲ့သို့အက်ပ်များကိုထောက်ပံ့မည်လား။ စာဖတ်သူတွေကိုကျွေးမွေးလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ PC ကနေ ReMarkable ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။
Consuelo Salas Lamadrid အားပြန်ကြားပါ
ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်၎င်းသည်တံတံရှိသည့်အချက်ကိုကြိုက်သည်။ စကားမစပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဟာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတာတွေထဲကထူးခြားချက်ကိုလန်းဆန်းစေနိုင်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လန်းဆန်းမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချီးကျူးခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာပြောခဲ့တာက E ink သည်နောက်ခံဖြူသော screen နှင့်လုပ်သင့်သည်။ ၎င်းထုတ်ကုန်တွင် frame အလွတ်နှင့်အတူ E link ၏နောက်ခံသည်မှောင်မိုက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း built-in အလင်းနှင့်အတူ ereaders အသစ်ကဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ရှင်းနေသည်မှာနည်းပညာ၏အခြေခံသည်အဖြူရောင်နောက်ခံနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆန့်ကျင်ဘက်များရရှိရန်အလွန်အခက်တွေ့နေသည်။ စကားမစပ်၊ ကြီးမားသော ereaders များတွင် (8 over အထက်) တွင်အလင်းရောင်လမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုရန်အခက်အခဲရှိရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့တွင်တစ်ခုမျှမရှိပါ။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ဘောပင်နှင့်မကိုက်ညီပါ။
စကားမစပ်၊ ၁၀ လက်မအရွယ်စာရေးသူတစ် ဦး နှင့်အတူတံတစ်ချောင်းပါသော ereader သည်အလွန်ကောင်းသည်။ Reader နှင့် Notebook ... ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းတွေဟာသူတို့အတွက်အရမ်းဈေးကြီးလွန်းနေတုန်းပဲ။ ဒါကိုတက်ဘလက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ပိုပါတယ်။
တစ်နေ့ကျရင် Amazon ကအဲဒီလိုမျိုးထုတ်ကုန်မျိုးရောင်းဖို့ ၀ ယ်လာရင်လား။ ဒါဟာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူတွေလည်းအားရကျေနပ်မှာဖြစ်ပြီးစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမှာပါ။
ကောင်းပြီ, ငါပထမ ဦး ဆုံးမှတ်ချက်မရခဲ့ဘူးထင်နှင့်ယခု, ကောင်းစွာနှစ်ခု။
ငါလိုအပ်တာကဖန်သားပြင်ကြီးကြီး e-reader ပဲ၊ ငါ pdf စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ဂရပ်ဖစ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာစတဲ့စာရွက်တွေဖတ်နိုင်အောင်တက်ဘလက်နဲ့တူတဲ့မြန်နှုန်းနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီးထွားလာတယ်။ ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအဘယ်သူမျှမသိ ...
ဥရောပသမဂ္ဂသည်စာအုပ်များအတွက် VAT ကိုလျှော့ချနိုင်သည်
စီးကရက်များကဲ့သို့ဈေးကြီးသော eReader တစ်ခုဖြစ်သော Onyx Boox MonteCristo